2014-05-18 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
IN Photo and Media Editor Tools - ON Friday, May 23, 2014 No comments
Adobe Muse CC 7.4 Build 30 Multilingual | 44.4 MB
ဒီနေ့ထွက် Update လေးရလာလို့တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
သူက Web Template တွေကို တခြား Web Developer Tools တွေ နားလည်တတ်
ကျွမ်းစရာမလိုပဲ photoshop အခြေခံလေးနားလည်ထားယုံနဲ့ အဆင်ပြေပြေဖန်တီးနိုင်
အောင် ကူညီပေးပါတယ်။ မိမိလိုချင်တာကို photoshop ဆွဲသလို ကောက်ဆွဲလိုက်ယုံ
ပါပဲ။ လိုအပ်ရင် အောက်မှာဒေါင်းယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
Design professional websites without writing code. Adobe Muse enables graphic designers to get content on the web, using familiar features, hundreds of web fonts and built-in tools to add interactivity. Plus, create unique tablet and smartphone versions of desktop sites. Publish with the Business Catalyst service, or with any hosting provider.
Simple visual site planning for desktop and mobile
Operating System: Microsoft® Windows® XP Home, Professional, or Tablet PC Edition with Service Pack 3; Windows Server® 2003 or 2008; Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise (including 64-bit editions) with Service Pack 2; or Windows®7with Service Pack 1, Windows 8 or Windows 8.1
iSkysoft Video Converter Ultimate 5.1.3.0 Full With Crack
IN Converter - ON Friday, May 23, 2014 No comments
iSkysoft Video Converter Ultimate 5.1.3.0 Multilingual | 40.91 MB
﻿iSkysoft Video Converter ဟာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ Video Format တွေကို ပြောင်းတဲ့ software ပါ.. ဗွီဒီယို အရည်အသွေးလည်းကောင်းပြီး လူကြိုက်လည်း များလာပါတယ် Format ပေါင်းများစွာကိုလည်း Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုတဲ့ Feature တွေကိုသိချင်ရင်တော့ အောက်မှာ
Aimersoft Video Editor 3.6.2.0 Full With Serial
Aimersoft Video Editor 3.6.2.0 | 58.5 MB
Aimersoft Video Editor 3.6.2.0 ကရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ဖြတ်၊ ဆက်၊ Effect ထည့်၊ နောက်ခံ သီချင်း ပြောင်း ၊ စာတန်းထိုး စတာတွေကို လိုသလို စိတ်ကူးကောင်းရင် ကောင်းသလို ဖန်တီးလို့ရပါတယ်စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူ စမ်းသပ်နိုင်ကြပါတယ်ဗျာ..
• Export in popular formats: You can save your video inawide variety of regular video formats, including MP4, MOV, AVI, WMV, FLV, MKV, 3GP and more for watching later anywhere.
• Convert to portable devices: Video presets for iPhone, iPad, iPad, smartphones, PSP, Xbox 360, etc. are provided, which means that you can just save the video to play on mobile devices seamlessly.
• Create and share on YouTube: It's time to let your family and friends watch your video creation. Simply enter the required YouTube info and you can directly upload and share the movie on YouTube.
• Save and burn to DVD：Burning your production to DVD is not onlyagood way to keep the videos, but alsoagood choice for family gifts. Now you are able to burn video to DVD asafancy gift and watch it on your DVD player/TV comfortably.
iOrgsoft DVD Maker 2.0.8 Full With Serial
iOrgsoft DVD Maker 2.0.8 | 101.7 MB
ဒီ Software လေးကတော့ မိမိတို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကို နောက်ခံ သီချင်းလေးတွေ ထည့် Slide Show လေးတွေ လုပ်ပြီး DVD/VCD အဖြစ် အလွယ်တကူ ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်
DxO ViewPoint 2.1.6 Build 30 x64
IN Photo and Media Editor Tools - ON Wednesday, May 21, 2014 No comments
DxO ViewPoint 2.1.6 Build 30 x64 Multilingual | 104 MB
HeliconSoft Helicon Filter 5.3.1.3
HeliconSoft Helicon Filter 5.3.1.3 Multilanguage | 300 MB
IN Burning - ON Wednesday, May 21, 2014 No comments
Nero 2014 Platinum 15.0.08500 Multilingual | 282 MB
ဒီကောင်လေးကိုတော့ အားလုံးကရင်းနှီးပြီးသားမို့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်
စရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်။ အခု ထွက်ရှိလာတဲ့ ဒီဗားရှင်းမှာ GUI ကိုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားလာတဲ့
ဝင်းဒိုး 8 စတိုင်မျိုး ယူထားတာတွေရမှာဖြစ်ပြီး ဖွင့်ဖွင့်ခြင်း မှာ Start Screen ပုံ
စံမျိုး နဲ့ မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Performance ပိုင်း ကိုကြည့်မယ်ဆို
ရင် iOS, Android and Windows 8 smartphones and tablets တွေအတွက် Converter
ပါဝင်လာသလို မည်သည့် photos, Movies, Audio တွေကိုလည်း တခါတည်း
ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် အရင် Version တွေထက် ပိုမိုမြန်ဆန်
လာပြီး Data တွေ High Quality နဲ့ Convert, Burn, Edit ပြုလုပ်နိုင်တာကို
လည်းတွေမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြား အသုံးဝင် Tools တွေလည်းထပ်ပေါင်းပါဝင်
တဲ့အပြင် Multimedia Suite တခုလို့ စွယ်စုံလုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေကြောင့်
Nero ချစ်သူများ လက်မလွှတ်တမ်း အသုံးပြုကြည့်သင့်ပါတယ်။
CyberLink PowerDirector Ultimate Version အသစ်ထွက်လာလို့ထပ်တင်ပေးလိုက်
တာပါ။ဒါကတော့ Video Editing ကို Professional ကျကျ လုပ်ဆောင်ချင်သူများ
အတွက် တကယ်ကို ပြည့်စုံကောင်းမွန် တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
CyberLink PowerDirector Ultimate 12.0.2915.0.part1
CyberLink PowerDirector Ultimate 12.0.2915.0.part2
DxO Optics Pro 9.5.0 Build 114 Elite (x86/x64)
ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကောင်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ အခု Update လေးရလာလို့
Wondershare Video Editor 3.6.2.1
Wondershare Video Editor 3.6.2.1 Multilingual | 64 MB
ဒါလေးက Video ဖိုင်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးတခါတည်း Burn လို့ရအောင်ကူညီပေးနိုင်
ပါတယ်။သီချင်းဖိုင်တွေမှာလည်းအောက်က Subtitle တွေထည့်သွင်းနိုင်တဲ့အပြင်လိုအပ်တဲ့ Effect တွေလည်းထည့်သွင်းနိုင်ပါသေးတယ်။ သူရဲ့ဖိုင်ဆိုဒ်နဲ့ ယှဉ်ရင်တော့မယုံနိုင်ဖွယ်
camera နဲ့အပျော်တမ်းရိုက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ဖြတ်လို့ရပါတယ်။Video Editing
စပြီး လေ့ကျင့်ချင်တဲ့သူစမ်းချင်တဲ့သူများအတွက်ဒီကောင်လေး အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်
Video Editing လုပ်ချင်သူများစမ်းသုံးကြည့်လိုက်ကြပါ..ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့
IN Photo and Media Editor Tools - ON Tuesday, May 20, 2014 No comments
Photoinstrument 7.0 Build 703 | 4.37 MB
ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိတို့ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ အတွက် Tool လေးတွေ တော်တော်စုံတဲ့
ဆော့ဝဲလ်လေးပါမျက်နှာတပြင်လုံးကို ချောမွတ်နေအောင် ဖန်တီးယူလို့ ရပါတယ်..ဒီကောင်လေး
တဲံ့ဆောစ့်ဝဲလ်ပါ ဒီကောင်လေးကို ဖွင့်သုံးတဲ့အခါမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလေးနဲ့ လိုအပ်ရင် လုပ်ပြ
ခိုင်းလို့ ရပါတယ်..။မလိုအပ်တော့ရင်တော့ ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ..။ ဒီဓါတ်ပုံပြင်ဆင်
တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးကို အသုံးလိုတဲ့သူများကတော့ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူ
လိုက်ပါဗျာ.. ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 4.37 MB ပဲ ရှိပါတယ်.
Softexia ScreenshotPhotoinstrument Important features:
Amazing Slideshow Maker 3.4.6.0 + Templates | 43.16 MB
IN Players - ON Tuesday, May 20, 2014 No comments
CyberLink PowerDVD 14.0.4028.58 Ultra Multilingual | 294.01 MB
Blu-ray , HD Movie တွေကို ကြည့်ရှုဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး Media Player
တစ်ခုပါ။ နောက်ပြီး Photo တွေ၊ Music တွေအားလုံးကိုလည်း Support
လုပ်တာကြောင့် All In One Media Player လို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။
IN Screen Capture - ON Tuesday, May 20, 2014 No comments
TechSmith Camtasia Studio 8.4.0 Build 1691 | 251.74 MB
ဒါက Screen Recording & Video Editing Tools ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါ
ဘူး။ Video ထဲက Color တွေချိန်းတာ Size ကိုလိုသလို ဖြတ်တောက်တာ နောက် ရုပ်နဲ့နဲ့အသံ လိုသလို
နေရာချဖို့ TimeLine သုံးနိုင်တာ၊ Effect တွေထပ်ထည့်တာ အရောင်တင်တာ စသဖြင့် လိုသလို ပြင်ဆင် တည်းဖြတ် ပြီး You tube, Facebook, Email, Twitter စတဲ့ လူမှုကွန်ယက် Website တွေကို တိုက်ရိုက်
Share ပေးနိုင်ပါတယ်။ စမ်းသုံးကြည့်ကြပါဗျာ..။
IN Antivirus - ON Monday, May 19, 2014 No comments
AVG Internet Security 2014 14.0 Build 4592 Multilingual (x86/x64) | 151.6 MB / 164.8 MB
AVG Internet Security 2014 14.0 Build 4592 Multilingual (x86)
AVG Internet Security 2014 14.0 Build 4592 Multilingual (x64)
iPixSoft Video Slideshow Maker Deluxe 3.3.0.0 + Templates pack
IN Photo and Media Editor Tools - ON Monday, May 19, 2014 No comments
iPixSoft Video Slideshow Maker Deluxe 3.3.0.0 + Templates pack | 46.62 MB
Sony Vegas Movie Studio Platinum 13.0 Build 932 Full With Keygen
Sony Vegas Movie Studio Platinum 13.0 Build 932 (x64) Multilingual | 466 MB
Home Page - http://www.sonycreativesoftware.com/moviestudiope
iSkysoft Video Converter Ultimate 5.1.3.0 Full Wit...
CyberLink PowerDVD 14.0.4028.58 Ultra Multilingual...
iPixSoft Video Slideshow Maker Deluxe 3.3.0.0 + Te...
Sony Vegas Movie Studio Platinum 13.0 Build 932 Fu...